बैङ्कहरूको जस्तो राम्रो विजनेस अरूको छैन : राष्ट्र बैङ्क, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग कुराकानी | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-08-22T13:47:31.430002+05:45
बैङ्कहरूको जस्तो राम्रो विजनेस अरूको छैन : राष्ट्र बैङ्क, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग कुराकानी
personएलिजा उप्रेती access_timeबैशाख २५, २०७५ chat_bubble_outline0
चालु आर्थिक वर्षको (२०७४/७५) तेस्रो त्रैमासमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो मुनाफा गरेका छन् । बैङ्कहरूले आफूसँग लगानी गर्ने रकम छैन भनेर कोलाहल गरिहँदा उनीहरूले प्रस्तुत गरेको वित्तीय विवरणले नसोचेको नाफा हासिल भएको छ । तरलता समस्या देखाउँदै बैङ्कहरूले ठूला रकमका ऋण लगानी दिन मानेनन् । केहीले कर्जा दिन रोके भने केहीले कम गरे । यता, निक्षेपको ब्याजदर पनि अचाक्ली वृद्धि गरेर निक्षेप खोसाखोस गर्नसमेत पछि परेनन् । त्यसले पनि निक्षेप नबढेपछि ब्याजदर बढाउनुको औचित्य देखेनन् र मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने र साधारण बचतमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने सहमति गरे । अहिले ब्याजदर स्थिर छ । कतिपयले बैङ्कहरूले ब्याजदरमा सिन्डिकेट लागू गरेको आरोपसमेत लगाए । यी तमाम समस्याका बीच अन्ततः बैङ्कहरूको नाफा बढेको छ । अहिलेको बैङ्कहरूको नाफा वृद्धि स्वाभाविक कि अस्वाभाविक, तरलताको अवस्थमा कतिको सुधार आयो ? विदेशी विनिमय सञ्चितीको अवस्था लगायतका विषयसँग सम्बन्धित रहेर नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको केही अंशः
बैङ्कहरूको तेस्रो त्रैमास सकिएको छ, बैङ्कहरूले लगानी गर्ने रकम नै छैन भनिरहँदा तेस्रो त्रैमासको नाफा भने बढेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । यसलाईं तपार्इंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
तरलतामा अघिल्ला वर्षको तुलनामा समस्या भएता पनि कर्जा विस्तार चाहिँ रोकिएको छैन । वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने झण्डै १९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । कर्जा विस्तार उल्लेख्य रहेका कारण पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खासगरी वाणिज्य बैङ्कको मुनाफामा वृद्धि भएको हो । अर्को कुरा सबै बैङ्कहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा छन् । राष्ट्र बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अन्य निकायभन्दा पारदर्शी पनि छन् । अनुशासित पनि उत्तिकै छन् । यिनीहरू अरू क्षेत्रका प्रतिष्ठानभन्दा बढी पारदर्शी र अनुशासित भएका कारण मुनाफा वृद्धि सम्भव भएको हो । यस्तै अहिले नेपाल पुनःनिर्माण अर्थात् नव निर्माणमा गएको छ । आयातमा उल्लेख्य विस्तार भएका कारण ट्रस्ट रिसिट लोन, (व्यापार आयात लोन) बढेको हो । २÷३ महिनाका लागि कर्जा लिन्छन् र फेरि रिपेमेन्टक हुन्छ । यसको साइकल हुँदै जान्छ । कर्जा असुली पनि हुन्छ र ब्याज पनि असुली हुन्छ । तीन महिनामा लोन परिपक्व हुन्छ अर्थात आयात बढेको कारणले बैङ्कहरूको मुनाफा बढेको हो । यसैबीच अर्को कारण पनि छ । राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरको अन्तर) ५ प्रतिशतभन्दा मुनि राख्न निर्देशन दिएको छ । अहिले कर्जा, व्याजदर र तरलतामा जुन किसिमको उतार चढाव आएको छ, यो चाहिँ निक्षेपमा दिने ब्याजदरभन्दा कर्जामा लिइने ब्याजदर बढी भएकाले हो । अहिले स्प्रेडदर औषतमा साढे ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । यी कारणले बैङ्कको चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुनाफा ३६ अर्ब पुगेको हो । यसो हेर्दा १६–१७ प्रतिशतको मुनाफा देखिन्छ ।
तरलतालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिँदैन ?
यसमा दुईवटा फ्याक्टर महत्वपूर्ण छ । एउटा राष्ट्र बैङ्कले परम्परागत विन्डो मार्फत जुन तरलता दिनुपर्ने हो, त्यो दिइराखेको छ । राष्ट्र बैङ्कले अल्पकालीन तरलतामा व्यवस्थापन गरिरहेको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिको तरलताको जुन समस्या छ, त्यसलाई सरकारले पनि खर्च गर्न थाल्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनासाथ राष्ट्र बैङ्कमा रहेको नेपाल सरकारको नगद मौज्दात बजारमा आउँछ । तरलतामा सुधार आउँछ । तेस्रो भनेको बाह्य क्षेत्रको लगानी विस्तार हो । टुरिजम, रेमिट्यान्स र निर्यातमा सुधार र बाह्य क्षेत्रको लगानीमा सुधार आउने वित्तिकै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको क्रेडिट क्रन्चमा सुधार आउँछ ।